Imeko yangoku yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle e-China
Kwikota yokuqala yowama-2020, ukungenisa elizweni kunye nokuthunyelwa kwelinye ilizwe kwehle nge-6.4%, eyayinciphise kakhulu ngeepesenti ezi-3.1 ukusuka kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo. Ngo-Epreli, izinga lokukhula ngokubanzi kurhwebo lwangaphandle lwande ngeepesenti ze-5.7 ukusuka kwikota yokuqala, kunye nokukhula ...
Ukusetyenziswa kunye nokuthintela [bis (2-chloroethyl) ether (CAS # 111-44-4)]
[I-Bis (2-chloroethyl) ether (CAS # 111-44-4)], i-dichloroethyl ether isetyenziswa ikakhulu njengesixhobo esiphakathi sokwenza imveliso yokubulala izitshabalalisi, kodwa ngamanye amaxesha inokusetyenziswa njengearhente yokusinyibilikisa kunye nokucoca. Iyacaphukisa ulusu, amehlo, impumlo, umqala nemiphunga kwaye ibangela ukungonwabi. 1. Ho ...
Inkampani yethu yamkele udliwanondlebe nenkqubo yodliwanondlebe yeCCTV “yeBrand Power”.
Ngo-Matshi 2016, inkampani yethu yamkele udliwanondlebe nenkqubo yodliwanondlebe ne-CCTV ye "Brand Power". Olu dliwanondlebe lwalusingathwe ngumbhexeshi we-CCTV odumileyo uWang Xiaoqian, kwaye wazisa inkqubela phambili yenkampani kunye nefashoni yomsebenzi. I-Shijiazhuang Chenghexin Chemical Co, Ltd ...